SAWIRO : Ciidanka NISA oo soo bandhigay Burcad ay soo qabteen iyo xubin ka tirsan Al-shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRO : Ciidanka NISA oo soo bandhigay Burcad ay soo qabteen iyo xubin ka tirsan Al-shabaab
Xuseen Axmed 17 July 2016
Ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa maanta soo bandhigay Rag lagu soo qabtay fal burcad nimo ah oo ay ka wadeen xaafado ka tirsan degmooyinka Yaaqshid iyo Heliwaa ee gobolka Banaadir.
Raggan oo ay tiradoodu ahayd Saddex ayaa la sheegay inuu mid ka mid ihi baxsaday xilligii uu hawl-galkan fulinayeen Ciidanku,halka Labada kalena loo taxaabay xabsiga si looga sameeyo baaritaanno ku aaddan falka dhaca ah ee ay halkaasi ka wadeen,loona waafajiyo sharciga.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Nabad sugidda qaranka gobolka Banaadir G/sare Maxamed Xasan Faarax (Faran far) ayaa SONNA u sheegay inay raggani ku qaraaban jireen magaca hay’adda Nabad Sugidda isla markaana dadka ka qaata wixii ay haystaan.
Guddoomiyaha waaxda 1da Lulyo ee degmada Yaaqshiid Cabdi Mahad Axmed Sangaab ayaa sheegay inay raggan iska soo abaabuli jireen Guri ku yaalla xaafadda uu ka arrimiyo, wuxuuna intaa raaciyay in ay adeegsan jireen agab Millitery sida qoryo, baastoolado, Mindiyo IWM.
“Burcaddan waxay adeegsan jireen gaari kaarib ah,waxay ku xaraysan jireen geerash xaafadda ku yaalla, waxay isu ekeysiin jireen shirkad isgaarsiineed,waxay samaysteen boor uu ku qoran yahay magaca Wardoon Telecom,iyagoo ka been sheegi jiray magaca hay’adda Nabad sugidda Qaranka, ayuu yiri guddoomiyhu.
Qaar ka mida dadka dhibbanayaasha ahaa ee ay dhaceen Burcaddan abaabulan ayaa sheegay inay saq dhexe u iman jireen iyagoo isugu sheegi jiray inay yihiin nabad sugidda qaranka,iyagoo dabeeta ka qaata Mobillada,kambayuutarrada gacanta,Lacag,Baasaboorro, ID kaarro ,Shahaadooyin iyo wiixii kale ee ay gacantooda qabato.
Afhayeenka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar xalane ayaa sheegay inay raggani ahaayeen kuwo u dhaqmi jiray si anshax xumo ah, isla markaan wasaqeeyay magaca dhallin yarada degaankaas maaddaama ay dhici jireen waxyaabo aan laftooda muhiim u ahayd sida kaar aqoonsi iyo shahaadooyin jaamacadeed.
Xalane ayaa ugu dambayn u mahad celiyay shacabkii gacanta ka geysta ka geystay soo qabashada Burcadda iyo Ciidamadii kaalinta ka geystay inay hor keenaan dadkii dhibbanayaasha u ahaa oo ka war sugaya caddaaladda,wuxuuna ballan qaaday in sharciga la marin doono cid walbana loo celin doono wixii laga qaatay.
Ciidanka nabad sugidda Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa sidoo kale hawl-galkoodii maanta waxay ku soo qabteen xubin ka tirsan Al-shabaab, kaasoo uu taliye ku xigeenka nabad sugidda qaranka gobolka Banaadir G/sare Maxamed Xasan Faarax sheegay iney ku raadjoogeen maantana ay u suurto gashay iney gacanta kusoo dhigaan Ciidanka NISA caddaaladana la marin doono.
Dibadbax looga soo horjeedo afgambigii dhicisoobay ee Turkiga oo ka socda Muqdisho
Detainee Sara Al-Alaou has been Forcibly-Disappeared by Syrian Authorities in Adra Central Prison